Ebɛn Mboa na Jehovah Adasefo Asafo no Nya Fi Amansin do Ahwɛfo Hɔ?
Christianfo Greek Kyerɛwnsɛm no taa bɔ Barnabas nye ɔsomafo Paul hɔn edzin. Dɛm mbarimba yi soom dɛ ahwɛfo akwantufo a nna wɔserasera tsetse Christianfo asafo ahorow no. Ebɛnadze ntsi a? Nna hɔn nuanom Christianfo eyiedzi ho hia hɔn papaapa. Paul kãa dɛ, nna ɔpɛ dɛ ‘ɔsan kɛsera enuanom no’ hwɛ dɛ mbrɛ hɔnho tse. Nna ɔwɔ ɔpɛ paa dɛ obotwa akwansin pii mbrɛ ɔbɛyɛ a ɔbɔkɔ akɛhyɛ hɔn dzen. (Ndwuma 15:36) Dɛmara so na hɛn ahwɛfo akwantufo no pɛ dɛ wɔyɛ ndɛ.
Wɔba bɛhyɛ hɛn nkuran. Ɔmansin do hwɛfo biara sera asafo ahorow bɛyɛ 20, na odzi dapɛn kor wɔ asafo biara mu. Ɔyɛ dɛm mprɛnu afe biara. Yebotum enya mfaso pii efi dɛm mbarimba a wɔwɔ suahũ yi hɔ, na sɛ wɔawar so a yebotum enya bi dɛmara efi hɔn yernom so hɔ. Wɔbɔ mbɔdzen dɛ wobohu mbofra nye mpanyin a wɔwɔ asafo no mu no yie. Wɔdze enyigye hwɛ kwan dɛ wɔnye hɛn bɔbɔ mu akɔ asɛnka na wɔnye hɛn akɛyɛ hɛn Bible adzesũa ahorow. Dɛm ahwɛfo yi nye asafo mu mpanyimfo no kɛserasera enuanom. Mbrɛ ɔbɛyɛ a wɔbɛhyɛ hɛn dzen no, wɔma ɔkasa ahorow a ɔhyɛ nkuran wɔ nhyiamu nye ehyiadzi ahorow ase.​—Ndwuma 15:35.
Wɔkyerɛ obiara ho enyigye. Mbrɛ asafo no nye Jehovah ntamu ebusuabɔ tse no ho hia amansin do ahwɛfo paa. Wɔnye mpanyimfo nye asomfo no hyia na wosusũ nkɔenyim a asafo no enya no ho, na wɔdze afotu a mfaso wɔ do ma hɔn dɛ mbrɛ ɔbɛyɛ a wobedzi hɔn asodzi ahorow ho dwuma yie. Wɔboa akwampaaefo ma hɔn som edwuma no tu mpon. Na hɔn enyi gye ho dɛ wɔbɛbɛn hɔn a wɔaba nokwar no mu fofor no, na wɔaatse mbrɛ worinya nkɔdo no ho asɛm. Mbarimba yi mu biara fi ne pɛ mu dze noho ma dɛ “nyɛnkodwumadzifo ma” hɛn. (2 Corinthfo 8:23) Ɔsɛ dɛ yesũasũa hɔn gyedzi nye mbrɛ wɔdze hɔnho ma som Nyankopɔn no.—Hebrewfo 13:7.
Ebɛnadze ntsi na amansin do ahwɛfo serasera asafo ahorow no?
Ebɛn mfaso na ibotum enya efi hɔn nserahwɛ no do?
Hyɛ da a ɔmansin do hwɛfo no bɛba abɛsera asafo no nsew wɔ wo kalɛnda do, na amma ne kasaa a ɔbɛma no wɔ Ahendzi Asa do no mu biara ammpa wo tsir do. Sɛ epɛ dɛ ɔno anaa ne yer nye wo bɔ mu kɛyɛ wo Bible adzesũa bi wɔ dɛm dapɛn no mu mbrɛ ɔbɛyɛ a ibohu no yie a, kã kyerɛ wo Bible kyerɛkyerɛfo no.
Ebɛnadze Ntsi na Jehovah Adasefo Kɔ Ehyiadzi Akɛse Ahorow?
Afe biara, yɛyɛ ehyiadzi etsitsir ahorow ebiasa. Ebɛn mfaso na ibotum enya efi dɛm ehyiadzi ahorow yi mu?
Yedzi nhwɛdo a Jesus yɛe aber a nna ɔwɔ asaase do no ekyir. Akwan ahorow a ɔfaa do kãa asɛmpa no bi nye dɛn?